बस्नका लागि शरीरको अंग दान गर्नुपर्ने अनौठो गाउँ ! « Mero LifeStyle
मेरो लाइफस्टाइल	||5April, 2021
संसारमा कुनै पनि स्थानमा बस्नको लागि केही शर्त र नियम, कानूनहरु हुन्छन् । तर कल्पना गर्नुहोस् त,तपाईलाई आफ्नो होम टाउनमा बस्नका लागि यदि शरीरको कुनै एक अंग दान गर्नुपर्दा कस्तो लाग्ला ? विश्वमा यस्तै एउटा गाउँ छ, जहाँ बस्नका लागि शरीरको कुनै एक अंग दान गर्नुपर्दछ ।
यो गाउँको नाम विलास लस एष्ट्रेलस रहेको छ । यो गाउँ अन्टार्कटिका महाद्वीपमा रहेको छ । यो गाउँमा सुविधाहरुको अभाव छ । र पनि आवश्यक्ता अनुसार जनरल स्टोर, बैंक, स्कूल, सानो पोस्ट अफिस र अस्पताल बनाइएको छ । स्कूलमा बच्चाले शिक्षा त पाएँछन्, तर अस्पतालमा सुविधा भने कमै पाइन्छ । त्यहाँ एक ठूलो अस्पताल पनि छ । जो उक्त गाउँबाट एक हजार किलोमिटर टाढा रहेको छ । त्यसैले विलास लस एस्ट्रेलसमा कसैलाई अपेण्डिक्सको समस्या भएमा उपचार गाह्रो हुन्छ भनेर त्यो निकालिन्छ ।
यसलाई त्यहाँ गैह्रजरुरी अंग मानेर निकालिने गरिन्छ । त्यहाँ रिसर्चका लागि वैज्ञानिक बस्ने गर्दछन् । त्यस्तै चिलीका वायु सेना र थल सेनापनि त्यहाँ रहन्छन् । त्यहाँ रहने सैनिकका गर्भवती श्रीमतीहरुलाई त्यो बेला बिदा दिइन्छ, किनभने स्वास्थ्य सम्बन्धी सहस्या नहोओस् ।